News | आलिया भट्ट
News | Tag: आलिया भट्ट
बिना मेकअप कस्ती देखिन्छिन् आलिया ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म इन्डस्ट्रीकी सबैभन्दा सुन्दर तथा क्युट अभिनेत्रीको पहिलो नम्बरमा आउँछिन् । आलिया पार्टी या अवार्ड शो जहाँ पुग्दा पनि उनको फेशनले चर्चा पाउँछ ।
आलियाको फोनमा रनवीरको वालपेपर !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टलाई बुधबार राति आफ्नो साथी आकांक्षा रन्जनको फिल्म ‘गील्टी’को स्पेशन स्क्रीनिंगमा देखिएको थियो ।
छोटो पहिरनमा आलिया
एजेन्सी । अभिनेत्री आलिया भट्ट बलिउडकी एकदमै प्रतिभावान एवं सुन्दर अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् । बलिउडमा लामो यात्रा गरिसकेकी आलिया सबैको मनमा बस्न सफल छिन् ।
यी बलिउड कलाकारहरु जसले भारतमा भोट गर्न पाउँदैनन्
एजेन्सी । एजेन्सी । बलिउड फिल्मी उद्योग विश्वको सबैभन्दा ठूलो फिल्मी उद्योगमध्ये एक हो । बलिउड फिल्ममा हरेक हप्ता शुक्रबार नयाँ फिल्म रिलिज हुने गर्दछ । यसै बलिउड क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अनुहार उदाउने तथा कोही फिल्ममा जम्न नसक्ने हुन्छन् ।
बलिउडका ‘क्युट कपल’ रणवीर–आलिया
एजेन्सी । अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्टको जोडीलाई बलिउडमा ‘क्युट कपल’ भनिन्छ ।
पर्यावरणप्रेमी आलिया !
एजेन्सी । अभिनेत्री आलिया भट्टले गत वर्ष फोहोरसँग लड्ने प्रण गरेकी थिइन् । सचेत पर्यावरणप्रेमीका रुपमा उनले आफ्नो जीवनबाट प्लास्टिक हटाउने अठोटसमेत गरेकी थिइन् ।
फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ रिलिज भएपछि रणवीर–आलियाले बिहे गर्ने
एजेन्सी । अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्ट धेरै समयबाट नै बिहेको खबरलाई लिएर चर्चामा आइरहेका छन् ।
हुनेवाला सासुसँग आलियाले दिइन् यस्तो पोज
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपुर आजभोलि आफ्नो प्रेम जीवनलाई लिएर चर्चामा रहेका छन् । जुनसुकै कार्यक्रम तथा समारोहमा यी जोडी सँगै देखिन्छन् । हालसालै एकपटक पुनः यी जोडीको तस्बिर भाइरल भएको छ ।
यो दिन रिलिज हुँदै आलिया–रणवीरको फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’
एजेन्सी । रणवीर कपुर, आलिया भट्ट र अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ । फिल्मकी अभिनेत्री आलिया भट्टले इन्स्टाग्राममा भिडियो पोस्ट गर्दै उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।
‘गंगूबाई कठीयावाडी’को पोस्टरमा आलिया भट्टको 'माफिया क्वीन' लुक्स
एजेन्सी । बलिउड निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीको आगामी चलचित्र ‘गंगूबाई काठियावाडी’मा अभिनेत्री आलिया भट्ट फरक लुक्समा देखिने भएकी छिन् । फिल्ममा मूख्य भूमिका निभाउन गइरहेकी आलियाका ‘फस्ट लुक रिलिज’मा उनको पृथक चरित्रलाई दर्शाइएको छ ।